OpenFoam နဲ့ပတ်သက်၍
Thread: OpenFoam နဲ့ပတ်သက်၍
11-06-2012 09:38 AM #1
My Home or My School
OpenFoam က CFD tool တစ်မျိုးပါပဲ။ C++ အပေါ်မှာ အခြေခံထားပါတယ်။ CFD တွေမှာ Computation Code တွေကို Fortran, C or Mathlab တွေသုံးပြီး ကိုယ်ပိုင်ရေးရင်ရေး၊ ဒါမှမဟုတ် Fluent, Star CCM တွေလိုမျိုး Commercial Code တွေကို ၀ယ်ပြီး သုံးရင်သုံး ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ OpenFoam ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ Code တွေရေးရသလိုလည်း မခက်ခဲသလို ၀ယ်ပြီးလည်း သုံးစရာမလိုပါဘူး။ သူက Open Source ပါ။ ကြိ်ုက်သလို ယူသုံးနိုင်ပါတယ်။
သူက Linux os သုံးဖြစ်ပါတယ်။ Linux ရဲ့ သဘောက command line တွေအဓိကထားပြီး သုံးရတာမို့ Linux နဲ့တော့ ရင်းနှီးဖို့လိုပါတယ်။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ Window နဲ့အပြိုင် linux os တစ်ခုခုတင်ထားနိုင်သလို Window ထဲမှာကိုပဲ Virtual Box သုံးပြီးလည်း တင်နိုင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေသလို သုံးနိုင်ပါတယ်။ Linux မှာလည်း အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး OpenFoam ကလည်း ကွဲပါတယ်။ ကျွန်တော်က Ubuntu ကိုသုံးလေ့ရှိတာမို့ Ubuntu version ကိုယူလေ့ရှိပါတယ်။ သွင်းရတာလည်း မခက်ခဲပါဘူး။ အသုံးပြုတာ လက်ယဉ်ဖို့တော့ ကျူတိုရီယယ်နာနာလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ (CFD သမားတွေကိုပြောတာပါ)
ကျွန်တော်တို့ Code ရေးရင် တစ်ခုခုကို ဆွဲသုံးချင်ရင် Function, Subroutine တစ်ခုခုသတ်မှတ်ပြီး အဲဒီမှာ ကုဒ်အပြည့်ပြန်ရေးရပါတယ်။ OpenFoam ရဲ့အားသာချက်က Library တွေရှိပါတယ်။ တခုခုလိုချင်ရင် ဆွဲသုံးလိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါကြောင့် အတော်သက်သာပါတယ်။ စိတ်ပါဝင်စားတယ်ဆိုရင် စမ်းသုံးကြည့်စေလိုပါတယ်။ ကိုယ်လေ့လာလိုတဲ့ Geometry က ရှင်းရှင်းလေးဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ Flow in the pipe လိုမျိုး၊ NACA Profile တွေလိုမျိုး၊ နောက်သင်္ဘောမှာဆိုရင် Wigley Hull လိုပုံစံမျိုးဆိုရင် လွယ်လွယ်ကူကူ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ သင်္ဘောမှာတော့ နည်းနည်းရှုပ်တဲ့ Hull Type မျိုးကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း မစမ်းဖူးသေးတော့ မသိသေးဘူး။ ခုလောလောဆယ် OpenFoam ထက် တခြားကုဒ်တွေကိုသုံးပြီး လုပ်နေရတာမို့ OpenFoam ဘက်မလှည့်နိုင်သေးတာပါ။ သူငယ်ချင်းတို့ စမ်းသပ်လို့ရရင်လည်း လက်တို့ပါဦး။ OpenFoam တွေကို လေ့လာဖို့ အောက်ကလင့်ခ်ထဲမှာ OpenFoam software, tutorial အကုန်ရှိပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
The Following6Users Say Thank You to NayYanNaing For This Useful Post:
AndrewSway, pazflor, phoelapyae, William Paul, yeakharr, ကိုထွန်း
11-07-2012 04:02 AM #2
Osaka က CFD ဆရာ ဖိုရမ်မှာ ဆက်ရေးပါဗျ။ ကြိုဆိုပါတယ်။
အခုလောလောဆယ် CFD code အကြောင်းရေး၊သိနိုင်တဲ့ သူမျိုးက ကို NayYanNaing နဲ့ နိုင်ငံခြားပြန်ဆရာ၊ဆရာမ အချို့ ဘဲ ရှိနိုင်မယ်ထင်တယ်။
ဘာပဲပြောပြော ကျနော်တို့အဖို့ ကြားဖူးနားဝလောက်ရှိထားရင်ကိုဘဲ အကျိုးရှိလှပါပြီ။
Last edited by pazflor; 11-07-2012 at 04:21 AM.
The Following4Users Say Thank You to pazflor For This Useful Post:
NayYanNaing, William Paul, yeakharr, ကိုထွန်း
11-09-2012 08:22 AM #3
ကျနော် OpenFoam သို့မဟုတ် CFD Software တစ်ခုခုထဲမှာ NACA profiles တွေကို Analysis လုပ်ချင်ပါတယ်။
The Following2Users Say Thank You to yeakharr For This Useful Post:
William Paul, ကိုထွန်း
11-09-2012 03:38 PM #4
Viscous flow ထဲမှာတော့ မလုပ်ဖူးဘူးဗျ။ Potential flow မှာတော့ Joukowski Wing အတွက်ရေးထားတာတော့ရှိတယ်။ တိုတိုလေးဆိုတော့ Fortran နဲ့ပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်။ ရိုးရိုး NACA အတွက်လည်း Potential Flow ပဲရှိတယ်ဗျ။
Last edited by NayYanNaing; 11-09-2012 at 05:12 PM.
The Following5Users Say Thank You to NayYanNaing For This Useful Post:
pazflor, tunaungkyaw, William Paul, yeakharr, ကိုထွန်း
11-09-2012 08:57 PM #5
Thank you for your reply. Please send to my mail.
11-10-2012 08:40 AM #6
Ok, I will send tonight. Btw, do you have Gambit? I saw you postedalot of cracked file,, if you have,,
The Following3Users Say Thank You to NayYanNaing For This Useful Post:
William Paul, yeakharr, ကိုထွန်း
11-11-2012 11:27 AM #7
Originally Posted by NayYanNaing
Btw, do you have Gambit?
I HAVE 2.4.6 for ansys/fluent
I never tested yet.
I will upload and tell you link ASAP.
NayYanNaing, William Paul, ကိုထွန်း
11-11-2012 05:54 PM #8
Originally Posted by yeakharr
Is this version 2.4.6 is compatible with fluent 6_2_16? I got some problems with license file and I think it is not compatible?
The Following2Users Say Thank You to NayYanNaing For This Useful Post:
11-20-2012 04:30 PM #9
လိုင်စင်ဖိုင် ကုန်သွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အန်းစစ်ဗားရှင်းအသစ်သုံးပါလား။ ဂန်ဘစ်က အရင်ဟောင်းတုန်းကပါ။
ဒီမှာ အာရ်၁၂ အန်းစစ်ပါ။
NayYanNaing, William Paul
12-03-2012 03:46 PM #10
Quick Navigation OpenFOAM Top
All times are GMT +6.5. The time now is 12:46 PM.